မက်ဆီရဲ့ ဂျာစီကို ရဖို့ ကတောက်ကဆဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီတလီ-ဂျူဗီခံစစ်အတွဲ – Sports A2Z
La Liga • Serie A • UCL&UEL
မက်ဆီရဲ့ ဂျာစီကို ရဖို့ ကတောက်ကဆဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီတလီ-ဂျူဗီခံစစ်အတွဲ
အီတလီခံစစ်အတွဲဖြစ်တဲ့ လီယိုနာဒို ဘိုနူချီနဲ့ ဂျော်ဂျို ခေးလီနီတို့အတွဲအဖက်က ဂျူဗင်တပ်စ်မှာလည်း အတွဲညီခဲ့ပြီး အီတလီလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့လည်း မကြာမီကမှ ယူရို ၂၀၂၀ ဖလားကို အင်္ဂလန်မြေမှာ အိမ်ရှင်ကို အနိုင်ယူပြီး ဖလားရယူခဲ့သလို အီတာလျံတို့အတွက် အရေးပါတဲ့ ချေပဂိုးကိုလည်း ဘိုနူချီက သွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။
ဘိုနူချီကတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ဘာဆာတိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ် မက်ဆီရဲ့ ဂျာစီကို တောင်းခဲ့တုန်းက သူ့ရဲ့ခံစစ်တွဲဖက်ကို စိတ်စနိုးစနောင့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး သူတို့လို တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ကောင်းကောင်းသိတဲ့အနေအထားမှာ ဒါမျိုးဖြစ်ရပ်ကတော့ ရှာမှရှားပါပဲ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ နူးကမ့်က ပွဲပြီးခါနီးမှာတော့ ဘိုနူချီက “လီယို”ဆိုပြီး အင်္ကျီတောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မက်ဆီအနားကို သွားခေါ်ခဲ့ချိန်မှာ ခေးလီနီက သူ့လက်ကို လာရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ခေးလီနီအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီရဲ့ဂျာစီကို လိုချင်လို့ ဘိုနူချီကို သတိပေးတာလား၊ သူ့အသင်းဖော်ကို ပွဲထဲမှာ အာရုံစိုက်စေချင်လို့လား ဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိမယ့်အရာပဲဖြစ်ပေမယ့် ခေးလီနီရဲ့ အပြုအမူက ဘိုနူချီအတွက်တော့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဘိုနူချီအနေနဲ့ အသင်းဖော်ရဲ့ အဟန့်ခံခဲ့ရပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် “လီယို”ဆိုပြီး ထပ်မံကြိုးစားခဲ့သလို “ခင်ဗျားရဲ့ အင်္ကျီကို ရနိုင်မလား”လို့ မေးခဲ့ပြီး ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့သလို နှစ်ကျော့ပေါင်းရလဒ်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ ကွာတားဖိုင်နယ်က ထွက်ခဲ့ရတဲ့ ပွဲအပြီးမှာတော့ သူရဲ့ ဆန္ဒပြည့်ဝခဲ့ပြီး မက်ဆီရဲ့အင်္ကျီကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာတော့ ဂျာစီလဲလာတဲ့ အကြောင်းကို မေးကြတော့ ‌ဘိုနူချီက “ပွဲအပြီးမှာ မက်ဆီရဲ့ အင်္ကျီကို ယူတာလား? ကျွန်တော်ကတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆီက ဂျာစီကိုရတယ်ဆိုတာနဲ့တင် ကျေနပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်သားလည်း အတော်ပျော်လိမ့်မယ်”လို့ ပြောသွားခဲ့တာပါ။
၃၄ နှစ်သားကြီးအနေနဲ့တော့ မက်ဆီက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆိုတဲ့စကားကို ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုက အီတလီသားကြီးနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်မှာ အသင်းဖော်ဖြစ်နေသည့်တိုင် သူ့စိတ်ထဲရှိတဲ့စကားကို လွတ်လပ်စွာ ပြောခွင့်ရှိနေပြီး ခေးလီနီနဲ့တော့ လက်ရှိအချိန်အထိ အတွဲအဖက် မပျက်ဘဲ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြနေနိုင်ဆဲလည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ZAWGYI: အီတလီခံစစ္အတြဲျဖစ္တဲ့ လီယိုနာဒို ဘိုႏူခ်ီနဲ႔ ေဂ်ာ္ဂ်ိဳ ေခးလီနီတို႔အတြဲအဖက္က ဂ်ဴဗင္တပ္စ္မွာလည္း အတြဲညီခဲ့ၿပီး အီတလီလက္ေ႐ြးစင္အသင္းနဲ႔လည္း မၾကာမီကမွ ယူ႐ို ၂၀၂၀ ဖလားကို အဂၤလန္ေျမမွာ အိမ္ရွင္ကို အႏိုင္ယူၿပီး ဖလားရယူခဲ့သလို အီတာလ်ံတို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ ေခ်ပဂိုးကိုလည္း ဘိုႏူခ်ီက သြင္းယူေပးခဲ့တာပါ။
ဘိုႏူခ်ီကေတာ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းတို႔ရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ဘာဆာတိုက္စစ္မႉး လီယြန္နယ္ မက္ဆီရဲ႕ ဂ်ာစီကို ေတာင္းခဲ့တုန္းက သူ႔ရဲ႕ခံစစ္တြဲဖက္ကို စိတ္စႏိုးစေနာင့္ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး သူတို႔လို တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့အေနအထားမွာ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ရွာမွရွားပါပဲ။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တုန္းက ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းအေနနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ႏူးကမ့္က ပြဲၿပီးခါနီးမွာေတာ့ ဘိုႏူခ်ီက “လီယို”ဆိုၿပီး အက်ႌေတာင္းဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ မက္ဆီအနားကို သြားေခၚခဲ့ခ်ိန္မွာ ေခးလီနီက သူ႔လက္ကို လာ႐ိုက္သြားခဲ့ပါတယ္။
ေခးလီနီအေနနဲ႔ ဘာစီလိုနာတိုက္စစ္မႉး မက္ဆီရဲ႕ဂ်ာစီကို လိုခ်င္လို႔ ဘိုႏူခ်ီကို သတိေပးတာလား၊ သူ႔အသင္းေဖာ္ကို ပြဲထဲမွာ အာ႐ုံစိုက္ေစခ်င္လို႔လား ဆိုတာကေတာ့ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ပဲ သိမယ့္အရာပဲျဖစ္ေပမယ့္ ေခးလီနီရဲ႕ အျပဳအမူက ဘိုႏူခ်ီအတြက္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့တာပါ။
ဘိုႏူခ်ီအေနနဲ႔ အသင္းေဖာ္ရဲ႕ အဟန႔္ခံခဲ့ရေပမယ့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ “လီယို”ဆိုၿပီး ထပ္မံႀကိဳးစားခဲ့သလို “ခင္ဗ်ားရဲ႕ အက်ႌကို ရႏိုင္မလား”လို႔ ေမးခဲ့ၿပီး ဂိုးမရွိသေရက်ခဲ့သလို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းရလဒ္နဲ႔ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္တို႔ ကြာတားဖိုင္နယ္က ထြက္ခဲ့ရတဲ့ ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ သူရဲ႕ ဆႏၵျပည့္ဝခဲ့ၿပီး မက္ဆီရဲ႕အက်ႌကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ပြဲအၿပီး အင္တာဗ်ဴးမွာေတာ့ ဂ်ာစီလဲလာတဲ့ အေၾကာင္းကို ေမးၾကေတာ့ ‌ဘိုႏူခ်ီက “ပြဲအၿပီးမွာ မက္ဆီရဲ႕ အက်ႌကို ယူတာလား? ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး ေဘာလုံးသမားဆီက ဂ်ာစီကိုရတယ္ဆိုတာနဲ႔တင္ ေက်နပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တင္မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္သားလည္း အေတာ္ေပ်ာ္လိမ့္မယ္”လို႔ ေျပာသြားခဲ့တာပါ။
၃၄ ႏွစ္သားႀကီးအေနနဲ႔ေတာ့ မက္ဆီက ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး ေဘာလုံးသမားဆိုတဲ့စကားကို ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုက အီတလီသားႀကီးနဲ႔ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္မွာ အသင္းေဖာ္ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ သူ႔စိတ္ထဲရွိတဲ့စကားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာခြင့္ရွိေနၿပီး ေခးလီနီနဲ႔ေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အတြဲအဖက္ မပ်က္ဘဲ အေကာင္းဆုံး ေျခစြမ္းျပေနႏိုင္ဆဲလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။
မာကာရဲ့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ မက်ဆီက Ballon d’Or ပြိုင်ဘက်တွေကို အလဲထိုးမလား